RASMI: Majalada France Football Oo Si Rasmi Ah U Shaacisay Ciyaartoy Kastaba Kaalinta Uu Ka Galay Codbixintii Abaal Marinta Ballon D'Or Iyo Cristiano Ronaldo Oo Markii Shanaad Abaal Marintan Hantay. – GOOL24.NET
RASMI: Majalada France Football Oo Si Rasmi Ah U Shaacisay Ciyaartoy Kastaba Kaalinta Uu Ka Galay Codbixintii Abaal Marinta Ballon D'Or Iyo Cristiano Ronaldo Oo Markii Shanaad Abaal Marintan Hantay.
Majalada France Football ayaa bilawday in ay shaaciso liiska kaalmaha ay kala galeen 30 kii musharax ee ay hore u soo saartay in ay ku tartamayaan abaal marinta Ballon D’or. Waxaana ugu danbayn lagu dhawaaqi doonaa xidiga ku guulaystay abaal marinta Ballon d’Or 2017.
Waxay majalada France Football shaacisay xidigihii ugu horeeyay ee magacooda la soo saaray iyo kaalmihii ay kala galeen iyada oo xidigaha kooxda Napoli iyo Liverpool ee Dries Mertens iyo Philippe Coutinho oo wada galay kaalinta 29 aad ee codbixintii abaal marinta Ballon d’Or.
Waxaana kaalinta 28 aad ee codbixintii abaal marintan galay xidiga kooxda AS Roma ee Edin Dzeko halka difaaca kooxda Bayern Munich ee Mats Hummels uu ku jiro kaalinta 27 aad waxaana kaalinta 26 aad ku jira goolhayaha kooxda Atletico Madrid ee Jan Oblak.
Gool dhaliyaha kooxda Real Madrid ee Karim Benzema ayaa kaalinta 25 aad kaga jira qiimaynta codbixintii abaal marinta Ballon d’Or. Kaalinta 24 aad waxaa buuxiyay gool dhaliyaha kooxda AS Monaco ee Radamel Falcao oo xili ciyaareedkii la soo dhaafay si buuxda dib ugu helay qaab ciyaareedkiisii fiicnaa.
Xidiga bandhiga wayn ka samaynaya kooxda Liverpool ee Sadio Mane ayaa kaalinta 23 aad ka galay codbixintii abaal marinta Ballon d’or. Difaaca kooxda AC Milan ee Leonardo Bonucci ayaa kaalinta 21 aad ku jira waxayna isku kaalin ku jiraan xidiga kooxda Dortmund ee Pierre-Emerick Aubameyang.
Goolhayaha Manchester United ee David De Gea ayaa noqday xidiga kaalinta 20 aad ka galay codbixintii Ballon d’Or halka isla xidiga kooxda Chelsea ee Eden Hazard ayaa kaalinta 19 aad ka galay codbixinta Ballon D’or inkasta oo la filayay in uu kaalin ka fiican gali karo.
Xidiga xulka qaranka France iyo kooxda Atletico Madrid ee Antoine Greizmann ayaa kaalinta 18 aad kaga jira codbixintii Ballon d’Or wuxuuna noqday xidiga labaaad ee ree France ah ee ku soo baxay qiimaynta majalada dalkiisa France wuxuuna Griezmann ka mid ahaa xidigaha loo hanwaynaa in ay kaalin ka fiican galayaan booskan uu hadda ku jiro.
Xidiga khadka dhexe ee kooxda Real Madrid ee Toni Kroos ayaa kaalinta 17 aad kaga jira codbixintii Ballon D’or waxaana ku sii xiga laacibka ay Real Madrid ka wada tirsan yihiin ee Marcelo oo kaalinta 16 aad ku jira. Xidiga kooxda Juventus ee Paulo Dybala ayaa kaalinta 15 aad codbixintan ka galay.
Xidiga xulka qaranka Belgium iyo kooxda Manchester City ee Kevin De Bruyne ayaa noqday xidiga kaalinta 14 aad ka galay qiimaynta codbixintii abaal marinta Ballon D’Or laakiin Luis Suarez oo aan sanadkan bandhigiisii ugu fiinaa muujin ayaa ku soo baxay kaalinta 13 aad oo ah meel ka baxsan tobanka xidig ee aduunka ugu fiican.
Francisco Isco oo waqtigiisii ugu fiicnaa ku soo qaatay Real Madrid ayaa kaalinta 12 aad ku jira isaga oo ka sare maray xidigo badan oo la filayay in ay ka saraynayaan. Gool dhaliyaha kooxda PSG ee Edinson Cavani oo isaga laftiisa laga filayay in uu kaalmaha hore soo galayo ayaa kaalinta 11 aad codbixintan ka galay.
Ugu danbayn France Football ayaa soo gaadhay tobanka xidig ee aduunka ugu fiican waxaana kaalinta 10 aad ku soo baxay xidiga kooxda Tottenham ee Harry Kane. Robert Lewandowski oo Bayern Munich ka tirsan ayaa kaalinta 9 aad ka galay qiimaynta France Football.
N’Golo Kante ayaa si layaableh ugu soo baxay kaalinta 8 aad kadib markii uu sii watay bandhigiisii cajiibka ahaa ee uu kala soo muuqday horyaalka Premier leaque isaga oo laba xili ciyaareed oo xidhiidh ah koobka Premier leaque ku soo guulaystay.
Da’yarka xulka qaranka France ee Kylian Mbappe ayaa bandhigii layaabka lahaa ee uu soo muujiyay tan iyo xili ciyaareedkii hore waxa uu abaal marinteeda ku helay in uu kaalinta 7 aad ka galay qiimaynta France football.
Kabtanka kooxda Real Madrid ee Sergio Ramos ayaa booskiisi abid ugu fiicnaa ka galay codbixinta abaal marinta Ballon D’Or wuxuuna galay kaalinta 6 aad isaga oo helay abaal marinta bandhigiisii uu Madrid kaga soo caawiyay koobka La Liga iyo Champions Leaque.
Xidiga khadka dhexe ee isla kooxda Real Madrid ee Luka Modric ayaa kabtanka kooxdiisa ku sii xiga wuxuuna kaalinta 5 aad ka galay abaal marinta Ballon d’or iyo codbixintii la dhiibtay.
Goolhayaha kooxda Juventus ee Gianluigi Buffon ayaa noqday xidiga kaalinta 4 aad galay ee ku soo baxay liiska France Football waxaana ka horeeya saddexda xidig ee kaalmaha kowaad ilaa saddexaad galay oo kaliya.
Halkan kala soco liiska ciyaartoyda abaal marinta Ballon d’Or ku tartamayay iyo kaalmaha ay kala galeen ee ilaa laga soo gaadhayo xidiga abaal marintan ku guulaystay.
29-Dries Mertens (Napoli)
29-Philippe Coutinho (Liverpool)
28-Edin Dzeko (Roma)
27-Jan Oblak (Atlético Madrid)
26-Mats Hummels (Bayern Munich)
25-Karim Benzema (Real Madrid)
24- Radamel Falcao (Monaco)
23- Sadio Mane (Liverpool)
21-Leonardo Bonucci (AC Milan)
20- David De Gea ( Manchester Unted)
18-Antoine Greizmann (Atltico Madrid)
17- Toni Kroos (Rea Madrdi)
13- Luis Suarez (Barcelona)
12- Francisco Isco ( Real Madrid)
11- Edinson Cavani (PSG)
10- Harry Kane (Tottenham)
8- N’Golo Kante (Chelsea)
7- Kylian Mbappe (PSG)
6-Sergio Ramos(Real Madrid)
5-Luka Modric (Real Madrid)
4-Gianluigi Buffon (Juventus)
3- Neymar Jr (PSG)
1- Cristiano Ronlado (Real Madrid)